Muungaab: Alshabaab ma joogaan Muqdisho ee waxaa jooga kuwa u eg – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna Duqa magaalada Muqdisho, Xasan Maxamed Xuseen Muungaab ayaa sheegay inaysan jirin jabhad la yiraahdo Al-Shabaab oo dhinac ka heysata magaalada Muqdisho, balse ay jiraan Shabaab u ekayaal sida boodada iyo dhilqaha oo kale dadka ugu dhex dhuumanaya.
“Muqdisho ma joogaan Shabaab ee waxaa jooga kuwa isu ekeysiiya” ayuu yiri Muungaab oo tilmaamay
Muugaab ayaa dadweynaha gobolka Banaadir ka dalbaday inay soo sheegayaan Shabaabka si looga taqaluso. Muungaab ayaa hadalkaan ka jeediyey debadbax Muqdisho ka dhacay oo looga horjeeday Alshabaab.
“Ciidamada ammaanka ma arki karaan Shabaab dhuumaaleysanaya, hase yeeshee dadweynaha ayaa sheegi kara cid kasta oo xaafadahooda ku dhuumaaleysaneysa, haddii ay soo sheegaanna maxkamad ayaa la saarayaa kaddibna waa la tooganayaa” ayuu yiri Muungaab.
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa sheegay in guddoomiye kasta oo ka tirsan gobolka Banaadir lagula xisaabtamayo wixii ka dhacay degmadiisa, wuxuuna intaasi ku raaciyay in 50-kii guriba ay u magacaabeen guddoomiye, kaasi oo lagula xisaabtamayo wixii ka dhacay xaafadiisa.
“Al-Shabaab anagaa janada uga dhow, qofkii soo sheega, askarigii soo qabta, maxkamadii xukunta iyo askartii toogata Al-Shabaab dhammaantood janada ayay gelayaan” ayuu yiri sidoo kale yiri Muungaab.
Dowladda Soomaaliya iyo Alshabaab ayaa mid kasta dhallinayarada u dagaalanta u sheegaan iney ku taagan yihiin wadada saxda ah.